XUBNO KA TIRSAN XISBUL ISLAM OO KU DHAWAAQAY INAY XILKII KA QADEEN DR .CUMAR IIMAN | Toggaherer's Weblog
MUDAHRAADO RABSHADO CULUS WATA OO KA DHASHAY WADAAD LA XIDHAY OO KA QARXAY BOOSAASO
Moqdisho 23 March 2009 (THN)
Xubno ka tirsan Isbaheysiga Xisbul Islaam garabka Sheekh Yuusuf Indha Cadde ayaa maanta ku dhawaaqay inay xilkii Gudoomiyenimo ee Ururka Xisbul Islaam ka qaadeen Dr. Cumar Iimaan Abuubakar
Xil ka qaadistan ayaa la rumeysan yahay inuu sabab u ahaa Yuusuf Indha Cadde oo horay ugu khilaafay dagaalkii ay qaadeen Xisbul Islaam, isla markaana maalmahan culeys kala duwan uga imaanayay beesha uu ka soo jeeda.
Gudoomiyaha Xisbul Islaam ayaa waxaa loo magacaabay Sheekh Maxamed Xasan Cameey, iyadoona lagu eedeeyay Gudoomiyihii hore Dr. Cumar Iimaan inuu jebiyay sharcigii u yaalay Xisbul Islaam
Xubnaha Xisbul Islaam oo shir jaraa’id ku qabtay Warshadii hore ee Baastada ayaa sheegay inay go’aansadeen inay xilka ka qaadaan Dr. Cumar Iimaan Abuubakar, iyagoona qodobo dhowr ah ka soo saaray xil ka qaadistiisa iyo xaalada dalka.
Qodobada ay soo saareen Xisbul Islaam waxaa ka mid ah:
1. Markii ay caddaatay in uu jabiyey heshiiskii lagu dhisay Xisbiga kaa soo ahaa in la yahay hal Xisbi, uuna ku dhaqmay wax khilaafsan heshiiskii.
2 .Xisbiga oo galay dagaal aanu amrin Mas’uulka Xisbiga, waxna uu ka qaban waayay
3.Isagoo diiday go’aankii iyo bayaankii shirweynihii culumada Soomaaliyeed, xubnaha kalena ku qancin waayay si waafaqsan shareecada Islaamka.
4. Sidoo kale waxaa guddoomiyha cusub ee xisbul Islaam lagu dhawaaqay inuu noqdo Sheekh Maxamed Xasan Cameeey.
Sidoo kale waxaa jira qodobo kale oo ay soo saareen Xisbul Islaam oo kala ah.
1. in Xisbigooda uu taageersanyahay Bayaankii Culumaa udiinka Soomaaliyeed ay soo saareen.
2. in waddanka lagu xukumo Shareecada Islaamka wax kalana aan loo baahneyn.
3. in ay baxaan ciidamada Shisheeye ee hada Dalka ku sugan kuwo kalena aan la keenin, waayo looma baahna.
4. in Ethiopia si buuxda waddanka ay uga baxdo dibna aysan ugu soo laaban.
5. in Soomaalida arrimaheeda ka tashato sidii horay loogu aqoon jiray.
6. kooxda Jabuuti waa in ay fuliyaan Go’aankii Culimada oo ahaa in ciidamda Ajnabiga ah ee dalka jooga mudadii 4-bilood aheyd oo ay qabteen kuwo kalena aan la keenin.
Ururka Xisbul Islaam oo ay ku bahoobeen qaar ka mid ah Xoogaga ka dagaalama Soomaaliya ayaa kal hore isku khilaafay dagaaladii ka dhacay Muqdisho oo uu ururkaas qeyb ka ahaa, waxaana Xisbigu haatan u noqday mid labo garab u kala jabay, bacdamaa Gudoomiyihii Ururkaas Cumar Iimaan uu heysto taageerada xubnaha Xisbul Islaam.
Yuusuf Indha Cadde ayaa dhowaan sheegay inuu iska casilay xilka Taliyaha Ciidamada Isbaheysiga Xisbul Islaam, waxaana tan iyo wixii markaas ka dambeeyay uu Xisbigu noqday mid labo garab u kala jaba, isla markaana si weyn isugu khilaafa xaaladaha dalka.
Tani ay ah mid horseedi karta inuu bur bur ku yimaado dhismaha Xisbul Islaam oo ay horay ugu midoobeen kooxaha Muqaawamada ee kala ah Jabha Islaamiyah, Raaskambooni, Maxkamadaha garabka Asmara, iyo Mucaskarka Caanoole.
Ma jirto ilaa iyo hada wax war oo ka soo baxay Gudoomiyaha xilka laga qaaday Dr. Cumar Iimaan Abuubakar, waxaana laga war dhowrayaa sida uu jawaab uga bixiyay Dr. Cumar Iimaan.